Drum uhlobo ash liphole - China Kechengyi Environmental Protection and Electric Power Technology
Owomileyo-uhlobo izixhobo zeBlack yokuphatha for ungacolwanga Coal Boiler
Owomileyo-uhlobo zeBlack yokuthutha
isixhobo zeBlack Large extrusion
Single - roll machine SLAG
ash Dry umlayishi isambuku
emnyango plug womoya
SLAG wesisele kunye nezixhobo ezincedisayo
Emanzi-uhlobo izixhobo zeBlack yokuphatha for ungacolwanga Coal Boiler
Kwamanzi uSilo SLAG
emnyango shutoff ngamanzi
Ize zeBlack swa
SLAG okuhambisa gasification eziko Boiler
Boiler izixhobo ukususwa ash
bin ash kunye nezixhobo ezincedisayo
Isigaba ashinyeneyo inkqubo eveza ash womoya
Yaze yangxenga ifuthe lomanyano phase inkqubo eveza ash womoya
isilayidi Manual plate nxi
inkqubo eveza lekalika Pneumatic
umandlalo kwibhoyila izixhobo ukususwa zeBlack Fluidized
Chain emele swa
Drum uhlobo ash liphole
Ibephakathi ize swa
Ngesandla sehla esangweni ipleyiti
Ibhokisi-uhlobo ash flusher
Amalunga tee Electric
Amalunga tee Manual
Screw ukuxuba ash yokuthutha
roll Single zeBlack isityumzi
joint amanzi rotary
Drum Type Ash kupholile
1. Jikelele Intshayelelo
Uhlobo Igubu ash liphole uhlobo igubu sokufudumeza umzimba esetyenziselwa zokupholisa umbandela bulk, ubume kunye nenkqubo nokwanana nobushushu apho ezahlukileyo kuleyo sokufudumeza njengesiqhelo. Kuba uhlobo igubu ash kupholile, iindlela ezintathu transfer ubushushu njengoko radiation thermal, Uhanjiso, kunye පිළිතුරු iimpendulo asebenza ngexesha elinye, kwaye zaseprayimari okupholisa medium ngamanzi kwaye zamabanga umoya. Kuyinto izixhobo eliphezulu ukusebenza ash okupholisa, nto leyo ilungiselelwe ukuhlangabezana nemfuno sayo esikhulu-volume CFB kwibhoyila. Igubu ash liphole siquka igubu, isixhobo ash ukuzaliswa, isixhobo ash ukubhobhoza, isixhobo drive, isixhobo transmission, okupholisa inkqubo amanzi kunye isixhobo ulawulo sombane, nesetyenziswa ngokukodwa eshushu ash Ukupholisa CFB kwibhoyila
2. Isakhiwo Main
Igubu ash liphole siquka igubu, inkqubo kwamaphiko, inkqubo drive, ash owa isixhobo, isixhobo ukubhobhoza uthuthu, okupholisa inkqubo amanzi kunye isixhobo ulawulo yombane. Isakhiwo ezingundoqo kunye nemisebenzi zezi zilandelayo:
Drum: le nto ndiyibhalayo yi igubu ngaphakathi igubu engaphandle, yaye kukho umngxuma wamanzi efakwe kunye ngokudibeneyo rotary nogwali nokubuya amanzi. Udonga engaphakathi igubu engaphakathi kuye nge welding, kunye iincakuba Screw ezijikeleze-zilungiswe iibhleyidi longitudinal, leyo angathumela ubushushu zeBlack ukuya esasaza amanzi okupholisa yi Uhanjiso thermal, පිළිතුරු iimpendulo kunye nemitha.
Igubu le yokusebenza inxalenye enkulu igubu ash kupholile, kwaye ash liphole lungohlulwa lube GTL series Igubu elinye ash liphole kunye GTLS series multi-ityhubhu zokuhlola Igubu ash liphole ngokungqinelana isakhiwo igubu.
Batshintshana inkqubo: le nto ndiyibhalayo inkxaso umsesane, ukuxhasa ivili, neseevili ayigange. I ring axhasayo efakwe kwi ngaphandle igubu, leyo iqhutywa indlela yokuqhuba ukuze tyhala igubu ejikelezayo kwi ekuxhaseni amavili amane. Ukuphakama igubu lingamiselwa ngokulungisa ivili axhasayo. Ivili catch unganqamla ukubana yezihlunu ngayo igubu.
Ash ukuwa isixhobo: kokuba wenziwe, emiseleni, ukwandiswa edibeneyo, ash owa nelembande, itanki uthuthu, isixhobo ash uphawu. Kwibhoyila ezantsi ash uya kuwela igubu le ash ebandayo nge kumbhobho ash ukugcwaliswa. Itanki ash a negative-ingcinezelo uphawu port. Icebo ash Ukutywinwa na ukuthintela umlotha evuzayo sisenzo anti-lokujikeleza ekhohlo.
Ash isixhobo ekubhobhozeni kwayo; le nto ndiyibhalayo ash kugesi uphawu ikhava nothuthu lokuphuma, kwaye ifakwe ezimbi-uxinzelelo lomoya izibuko nothuthu ukubhobhoza port. I-inshorensi ukutywina Yenziwe ngamacandelo amabini elisusekayo (amacala asentla nolusezantsi), nto leyo elula yesondlo.
Okupholisa wamanzi: kokuba wenziwe ejikelezayo ngokudibeneyo umbhobho, ukuba gubhu, ukubuyela umbhobho, ithumbu metal. Le nkqubo ingadala kude ubushushu etsalwe uthuthu. Ilunga ejikelezayo isasaze amanzi owongozelelweyo ukubuyela amanzi ngokulinganayo ekupheleni iplagi okufanelekileyo yesondlo kwaye ikhuselekile ngokunjalo. Ilunga ejikelezayo lixhotyiswe izincedisi zokhuseleko njengoko imitha uxinzelelo, RTD, valve ukhuseleko. Abo izincedisi ingafakwa kwi okupholisa sombhobho wamanzi ngokungqinelana kunye nemfuneko imisebenzi.
isixhobo ulawulo zombane: ikakhulu libhekisela yikhabhinethi ulawulo sombane kunye isixhobo ulawulo ezinxulumene, ukuze iphiwe imiqondiso amandla nolawulo ukuze scene ezipholileyo. Kunokuba ukuthumela ngaphandle uphawu kude ukuphumeza ulawulo kude.
3. Main Technical Ipharamitha
Imodeli wentaba liphole yi GTL (S) D - n x L (ekhohlo okanye ekunene), phakathi kwazo, D limele igubu ubukhulu (mm), kubandakanywa 700mm, 800mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm, no-2000 mm; n imela umthamo (t / h); L imela umgama phakathi owongozelelweyo lokuphuma (mm). Ngokutsho kwizikhundla ufakelo ezahlukeneyo, uthuthu liphole ukuba zihlelwe njengohlobo ekhohlo kunye nohlobo ekunene, ejongene lokuphuma ash kupholile, ukuba usele uhlobo xa injini i ekhohlo kwaye Uhlobo ekunene ukuba injini ekunene. Ubude uthuthu liphole azifani, nto leyo edla enxulumene ne amandla, ubushushu uthuthu, yaye umgama rated phakathi owongozelelweyo iplagi. Imveliso wentaba liphole ngu 0 - 80t / h. Kwaye ke ubushushu okupholisa 80 - 150 ℃
4. Instruction Ukufakwa
Beka ash ebandayo emhlabeni amcaba bethwele amandla ngaphezulu kwe 6000Pa, (iankile evulwa akuyomfuneko), emva koko makayifake i intsimbi ekufakweni emhlabeni iimbombo ezine ash ume kupholile, yaye weld intsimbi indawo kwi intsimbi olungisiweyo kwi ukunqanda ihamba xa ash liphole wahlala phantsi endaweni ekunene
Xa isiseko ingaphezulu emhlabeni, uyithululele ezimbini longitudinal okanye ezine strip plain ezinqamlezayo iziseko eziphathekayo kunye namandla ngaphezu C30 emhlabeni. Xa zicwangciswe uhlobo ekhohlo nasekunene uhlobo ash liphole ecaleni kwenye, kuba ukulungiswa lula kunye nokulungiswa, injini drive kufuneka amalungiselelo kwi Kwicala elingaphandle, nto leyo ethetha ubeke uhlobo lasekhohlo ash ebandayo kwicala lasekhohlo, kunye nelungelo uchwetheze ngasekunene.
GTL series Igubu eyodwa ash liphole
1) imveliso ezinkulu, owawufikelela 80t / h kwi eliphezulu
2) Indawo ezinkulu lwangaphakathi, nto leyo elula ukuze ihlolwe kwaye kulula yolondolozo kunye ngexabiso eliphantsi.
Next: SLAG womoya benza valve
Manual lobushushu eliphezulu esangweni valve
gear Drive chain
device lokondla SLAG
ukumelana lobushushu High compensator incence
No.62, indlela Xinjiang, jiaozhou isixeko, Qingdao mzi, kwiphondo Shandong, China
Manager Sales: Qingdao Liu
Ukusebenzisa Explosives for Boiler Deslagging